Xarunta Talo Bixinta La-talinta Wanaagsan waxay bixisaa umeerin hal-hal ah oo ku saabsan akhriska, farshaxanka luqadda, xisaabta, iyo cilmiga bulshada / muwaadinnimada. Tan waxaa ka mid ah hufnaanta hadalka iyo qoraalka, ereyada oo la hagaajiyay, faham weyn, xirfadaha aasaasiga ah ee xisaabta, iyo u diyaargarowga imtixaanka waddaniyadda. Marka lagu daro carruurta iyo dhallinyarada, in badan oo ka mid ah Dadka waaweyn ee Barta Luqadda Ingiriisiga ayaa wax lagu baraa Xarunta Waxbarashada.
Gabdhaha walaalaha ah iyo macalimiinta jiifka ah ee wax ka dhiga Xarunta Waxbarashada waxay leeyihiin khibrado sannado badan ah fasalka. Waxay khibradan u keenaan casharadooda umeerin, ha ahaato carruurta ama dadka waaweyn, akhriska ama xisaabta, ama barashada muwaadinimada. Runtii way jecelyihiin ardayda iyo fursadan si ay uga caawiso inay ku kalsoonaadaan xirfadahooda.
Waxaan bixinaa fursado umeerin qadka ah oo loogu talagalay dadka waaweyn iyo ardayda dhigata fasalada K - 12 inta lagu jiro sanad dugsiyeedka. Kulamada saacada-dheer waxaa la heli karaa laga bilaabo 9-11 subaxnimo iyo 12-5 galabnimo. Foomamka isdiiwaangalinta ayaa laga heli karaa bogga Diiwaangelinta.
Xarunta Talo Bixinta Talada Wanaagsan waxay nolosha ku badashaa waxbarashada.
Waxaan ka caawinnaa ardayda inay gaaraan awoodooda buuxda iyadoo loo marayo waxbarid shaqsiyeed.